यीनै हुन सेलिब्रिटीले चर्चा पाएपछि पुराना प्रेमीसँग गरे ब्रेकअप. – News Nepali Dainik
यीनै हुन सेलिब्रिटीले चर्चा पाएपछि पुराना प्रेमीसँग गरे ब्रेकअप.
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २९, २०७७ समय: १०:००:१३
बलिउड इन्डष्ट्रिमा कदम राखेपछि धेरैको जीवन पूर्ण रुपमा परिवर्तन हुनेगर्छ । यहाँ केही सेलिब्रिटी यस्ता पनि छन् जसले चर्चा पाएपछि आफ्नो जीवनशैलीमात्रै परिवर्तन भएन, उनीहरुका पुराना पार्टनर पनि परिवर्तन भए । आउनुहोस्, यीबारे जानकारी लिऔं ।
रणबीर कपुर–अवंतिका मलिकः
बलिउड इन्डष्ट्रिमा सन् २००७ को फिल्म सांवरियाबाट फिल्ममा कदम राखेका रणबीर कपुरले अवंतिका मलिकलाई डेट गरिसकेका छन् । एकातिर बचना ऐ हसिनों फिल्मपछि रणबीरले दीपिका पादुकोणलाई डेट गर्न सुरु गरे भने अवंतिका मलिकले सन् २०११ मा आमिर खानका भाञ्जा तथा नायक इमरान खानसँग विवाह गरिन् । इमरान र अवंतिकाका एक छोरी पनि छन् । यता रणबीर हाल आलिया भट्टसँग प्रेममा छन् । दुबैको चाँडै नै विवाह हुन लागेको चर्चा यत्रतत्र छ ।
दीपिका पादुकोण–निहार पाण्ड्याः
ओम शान्ति ओमबाट बलिउड डेब्यू गर्ने दीपिका पादुकोण बलिउडमा आउनुअघि मोडल तथा नायक निहार पाण्ड्यासँगको सम्बन्धमा थिइन् । दीपिका र निहारको भेट मुम्बईको एक्टिङ स्कूलमा भएको थियो, त्यसपछि यी दुई हिमेश रेशमियाको म्युजिक एल्बम आपका सुरुरमा सँगै देखिएका थिए । यी दुईको तीन वर्षसम्म प्रेम सम्बन्ध चल्यो । केही मिडियालाई विश्वास गर्ने हो भने यी दुई लिभ इनमा पनि बसेका थिए । हाल दीपिका पादुकोणले रणवीर सिंहसँग विवाह गरिसकेकी छिन्, यस्तै अर्कोतिर निहार पाण्ड्याले सन् २०१९ मा गायिका नीति मोहनसँग विवाह गरेका छन् ।
अनुष्का शर्मा–जोहेब यूसुफ
रब ने बना दी जोडीबाट शाहरुख खानसँग धमाकेदार डेब्यू गर्ने अनुष्का शर्मा आफ्नो मोडलिङको दिनमा मोडल जोहेब यूसुफलाई डेट गरिसकेकी छिन् । यी दुईको भेट मोडलिङका बेला बेंगलुरुमा भएको थियो र यहाँबाटै उनीहरुको सम्बन्ध सुरु भयो । यी दुईले लगभग दुई वर्षसम्म एकअर्कालाई डेट गरे । यद्यपि, अनुष्का स्टार बनेपछि यी दुई अलग्गिएका थिए । अनुष्काले सन् २०१७ मा भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीसँग विवाह गरेकी थिइन् । हालै अनुष्का एक छोरीकी आमा बनेकी छिन् ।
ऐश्वर्या राय बच्चन–राजीव मूलचन्दानीः
मिस वर्ल्ड भइसकेकी ऐश्वर्या राय आफ्नो मोडलिङ करियरका बेला चर्चित मोडल राजिव मूलचन्दानीलाई डेट गरिसकेकी छिन्। यी दुईले आफ्नो मोडलिङ करियरको सुरुवात सँगै गरेका थिए। ऐश्वर्याको बलिउड डेब्यूपछि यी दुई टाढिएका थिए । राजिवले ऐश्वर्याबाहेक नायिका मनिषा कोइरालालाई पनि डेट गरिसकेको बताइन्छ । यसैकारण यी दुई नायिकाबीच कहिल्यै कुरा बन्न नसकेको बताइन्छ । बलिउडमा आएपछि ऐश्वर्याको नाम सलमान खानसँग जोडियो र राजिव उनीसँग टाढा भए । हाल ऐश्वर्या अभिषेक बच्चनसँग आफ्नो पारिवारिक जीवन रमाइलोसँग व्यतित गरिरहेकी छिन् ।
अर्जुन कपुर–अर्पिता खानः
बलिउड नायक अर्जुन कपुर आजकाल मलाइका अरोडासँग सम्बन्धका कारण चर्चामा छन् । उद्यपि, एक समय यस्तो थियो कि अर्जुन मलाइकाकी नन्द अर्पिता खानसँग दुई वर्षसम्म सम्बन्धमा रहेका थिए । त्यतिबेला अर्जुन १८ वर्षका थिए र उनको तौल १४० किलो थियो । अर्पितासँग ब्रेकअपपछि अर्जुनले आफ्नो शरीर परिवर्तन गरे र बलिउड इन्डष्ट्रिमा कदम राखेका थिए । एक अन्तरवार्तका बेला अर्जुनले अर्पितालाई आफ्नो पहिलो सिरियस रिलेशन बताएका थिए । हाल अर्पिता आयुष शर्मासँग आफ्नो फ्यामिली लाइफ व्यतित गरिरहेकी छिन्।
आलिया भट्ट–अली दादरकरः
आजकाल रणबीर कपुरसँग नजिकिएका कारण चर्चामा रहेकी आलिया भट्ट इन्डष्ट्रिमा आउनुअघि अली दादरकरसँग सम्बन्धमा रहेकी छिन् । अली, आलियाका स्कूल पार्टनर थिए । सन् २०१२ मा स्टूडेन्ड अफ द इयरबाट बलिउड डेब्यू गरेपछि नायिकाको नाम सिद्धार्थ मल्होत्रासँग पनि जोडिएको थियो ।
सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य श्रोफः
दबंगबाट बलिउडमा डेब्यू गरपछि सोनाक्षी सिन्हा आदित्य श्रोफसँग सम्बन्धमा थिइन् । आदित्य फेम एडलेब्सका म्यानेजिङ डायरेक्टरका छोरा हुन् । यी दुई दुई वर्षसम्म सम्बन्धमा रहेका थिए । यद्यपि, केही झगडापछि उनीहरुको ब्रेकअप भएको थियो । यता सोनाक्षी आफ्नो बलिउड करियर बनाइरहेकी छिन् भने आदित्यले टिभी नायिका मेघा गुप्तासँग विवाह गरिसका छन् ।
प्रियंका चोपडा–असीम मर्चेन्टः
आफ्नो मोडलिङ करियरका बेला प्रियंका चोपडा मोडल असिम मर्चेन्टसँग सम्बन्धमा थिइन् । तर इन्डष्ट्रिमा आएपछि प्रियंका असिमसँग टाढा भएकी थिइन् । असिम प्रियंकाको जीवनमा एउटा फिल्म पनि बनाउन चाहन्थे । यद्यपि, यसको घोषणा भएपछि प्रियंकाले उनलाई लिगल नोटिस पठाएका थिए । हाल प्रियंका निक जोनससँग आफ्नो जीवनमा रमाइरहेकी छिन् ।
कंगना रनोट–अध्ययन सुमनः
आफ्नो करियरको सुरुवाती समयमा कंगना रनोट शेखर सुमनका छोरा अध्ययन सुमनसँग सम्बन्धमा थिइन् । यी दुईको सम्बन्ध सुरु हुँदा अध्ययन बलिउडबाट टाढा थिए । पछि उनले सन् २००८ को फिल्म हाल–ए–दिलबाट बलिउड डेब्यू गरेका थिए । कंगनाले बिस्तारै इन्डष्ट्रिमा सफलता हासिल गरिन् र अध्ययनबाट किनारा लाग्दै गइन् । ब्रेकअपपछि अध्ययनले एक अन्तरवार्तामा कंगनाले इन्डष्ट्रिमा सम्पर्क बनाउनका लागि उनको प्रयोग गरेको बताएका थिए ।
Last Updated on: February 11th, 2021 at 10:00 am